Dhexdhexaad Dameer Jinsi Dolls Iib Qiimo Jaban
Doll Dameer Jinsi Dhexdhexaad Ugu Fiican Iib
Halkaan waxaa ka muuqda doll galmoodka urdolls badhida oo dhexdhexaad ah. Waxay leeyihiin miskaha dhexdhexaad ilaa waaweyn qaabab kala duwan. Haddii aad raadineyso galmo dabada ah, caruusadda dameerka dhabta ah ee galmada ayaa ku siin doonta xiisaha ugu badan ee dabada ah. Inta badan cabbirkoodu sidoo kale waa caadi. Ma ahan wax aad u weyn ama aad u yar. Macaamiil badan ayaa halkaan ka helay caruusado lagu qanco. Kaalay oo arag kaaga!